Machar oo eedeeyay dowladda Kiir - BBC News Somali
Machar oo eedeeyay dowladda Kiir
Image caption Salva Kiir iyo Riek Machar.
Hoggaamiyaha fallaagada dalka Koonfurta Suudaan Riek Machar, ayaa sheegay in uu wali u hoggaansamayo heshiiskii nabadeed ee maalintii jimcaha ahayd ay wada saxiixeen isaga iyo madaxweyne Salva Kiir, inkastoo buu yiri dhinaca dowlwddu ay jabiyeen xabad joojintaasi.
Machar oo la hadlayay BBC-da ayaa sheegay in madaxweyne Salva Kiir uusan gacanta ku haynin oo uusan xakamayn karin qaar ka mid ah ciidamada u dagaalamaya sida kuwa Uganda iyo dagaalyahanno ka soo jeeda Darfur.
Waxa uu ku eedeeyay madaxweyne Salva Kiir in uu huriyay nacayb ku salaysan qabyaalad.
Wasiirka warfaafinta Koonfurta Suudaan Michael Makuei ayaa kal hore ku eedeeyay mucaaradka in ay ku xad gudbeen heshiiskaasi, balse waxa uu intaasi ku daray in dowladda aysan jebin doonin heshiiskaasi.
Heshiiska dhex maray labada dhinac ayaa ujeeddadiisu ahayd in lagu soo afjaro colaadda socotay muddada shanta bilood ah, taasi oo ay ku dhinteen kummanaan qof isla markaana ay ku barakeceen in kabadan hal milyan oo qof.